MIND မှ & အသက်ကိုထိန်းချုပ်ရေး: မာတင် Vrijland
အဆိုပါဆွေးနွေးမှု "DMT သင်တို့အဘို့သို့မဟုတ်မကောင်းစွာကောငျးသလဲ" ဤသူသညျရုတ်တရက်ခြင်း simulation မှတဆင့်သိမြင်လျှင်
အတွက် Filed MIND မှ & အသက်ကို CONTROL, NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	သြဂုတ်လ 13 2018 အပေါ်	•2မှတ်ချက်
DMT အပေါ်မှာငါ့ယခင်ဆောင်းပါးထဲမှာ ayahuasca နှင့် iboga အဖြစ်အမြစ်ကဲ့သို့ Extractive တွင်ပါရှိသောပစ္စည်းဥစ္စာ, သငျသညျညှိဟာ Saturn ကုဒ်အပေါ် transceiver ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို, အဘယ်သူသည်လူစုထဲကစိမ့်ဖို့အချက်ပြအဲဒီမှာပေါ်လာကြောင်းညွှန်ပြခဲ့ကြပေမယ့် အမှုအရာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းကတကယ်တော့ DMT အသုံးပြုမှုကို အသုံးပြု. မှတဆင့်ကြည့်ရှုရန်စတင်။ [ ... ]
ကျနော်တို့ကိုငါတို့လက်သို့ဤခြင်း simulation ၏ရလဒ်များကိုထားနိုင်သလား?
အတွက် Filed THE Simulator, MIND မှ & အသက်ကို CONTROL, NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	သြဂုတ်လ 8 2018 အပေါ်	•9မှတ်ချက်
ကျွန်မအလွန်ငယ်ရွယ်စဉ်ပြီးသားမေတ္တာရှင်ဘုရားသခင်ယုံကြည်ပေမယ့်အထူးသဖြင့်ကြောက်ရွံ့လျက်လှည့်ကြဘူးလုပ်ခဲ့ကြပေမဲ့လည်းကလူပေါင်းများစွာဟာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်စနစ်ဖြင့်သာအာရုံစိုနှင့်အမှတဆင့်၎င်းတို့၏ဘဝတစျခုလုံးသတ်မှတ်ပါစေဘယ်လိုကျွန်မကိုသဘောကျ။ အခုတော့ [ ... ] ဘုရား, အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်, ယရှေု, သာယုံကြည်ခြင်းတရားကိုမဟုတျပါဘူး
အဆိုပါ ayahuasca DMT ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများနှင့် pineal ဂလင်းရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်
အတွက် Filed MIND မှ & အသက်ကို CONTROL	by မာတင် Vrijland	သြဂုတ်လ62018 အပေါ်	•5မှတ်ချက်
မှန်မှန် ayahuasca သို့မဟုတ် DMT ပါဝင်သောအေးဂျင့်များ၏ပုံစံကိုတစ်ဦး DMT တူသောဥစ္စာကြိုးစားကြဖို့ကျွန်မကိုအကြံပြုသည်။ ရသည်မှာဒီဥစ္စာအတွေ့အကြုံကိုအမျိုးအစားနီးပါးသေလွန်သောသူတို့သည်ဖြစ်ပေါ်စေသည်နှငျ့သငျကိုယျခန်ဓာအတှေ့အကွုံထဲကအမြိုးမြိုးရှိသော pineal ဂလင်း, မြှင့်လုပ်ဆောင်။ အခုတော့ငါ [ ... ] အတွက်အတော်လေးတစ်ခုခုကြိုးစားခဲ့မူးယစ်ဆေးများ
အဘယ်သူသည်လူစီဖာ created နှင့်ခြင်း simulation ထက်နတ်ဆိုးများ, djinns သို့မဟုတ် Archons ဘာတွေလုပ်နေလဲ?
အတွက် Filed THE Simulator, MIND မှ & အသက်ကို CONTROL, NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	သြဂုတ်လ52018 အပေါ်	•6မှတ်ချက်
အထူးသဖြင့်ခရစ်ယာန်သို့မဟုတ်အစ္စလာမ့်ကမ္ဘာ့အမြင်အခင်းအကျင်းနှင့်အတူသူတို့၏အထောင့်ကနေကိုယ့်ကိုမကြာခဏမေးခှနျး get: သင်ဝဠာထိုနတ်ဆိုးများ, djinns, archons အကြောင်းကိုဘယ်လိုလူစီဖာနေသူများကဖန်တီးသောဘုရားသခင်ကိုအဘယ်သူ Luciferian တစ်ဦးခြင်း simulation, နေသူများကဖန်တီးထားပါတယ်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်? [ ... ] ငါသည်ဤဆောင်းပါးအတွက်ရှင်းလင်းချင်ပါတယ်ငါရှိလိမ့်မည်
Google ၏ cloud ကျောက်ဆူး technique ကို Aurgmented Reality (AR), စကြဝဠာတစ်ဦးခြင်း simulation ကြောင်းသီအိုရီထေူ?
အတွက် Filed THE Simulator, MIND မှ & အသက်ကို CONTROL, NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	သြဂုတ်လ52018 အပေါ်	•4မှတ်ချက်
အနည်းငယ်ဆောင်းပါးများကိုပြီးနောက်စာဖတ်သူများထိတ်လန့်အတွက်အတော်လေးသောများစွာသောမှတ်ချက်များအားဖြင့်သက်သေတစ်ဦး virtual reality ဘဝ၌သင်နှင့်ငါသည်အယူအဆအကြောင်းကိုစာဖြင့်ရေးသားခဲ့ကြသည်။ ငါ "အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးမှု" (ရူပဗေဒပညာရှင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနယ်နိမိတ်ကဲ့သို့) အလင်း၏အမြန်နှုန်းကိုအားနည်းစေပြီးလည်းအိုင်းစတိုင်းရဲ့သီအိုရီနေရာဒေသနှင့်လိုအပ်သောဖြစ်ရပ်ဆန်း, [ ... ] ၏နိယာမကြောင်းဖော်ပြထားသကဲ့သို့
ပို. ပို. လူတွေကိုအသက်ခြင်း simulation အတွက်မှတဆင့်ကြည့်ရှုရန်စတင်နေကြသည်: ဤအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်
အတွက် Filed THE Simulator, MIND မှ & အသက်ကို CONTROL	by မာတင် Vrijland	သြဂုတ်လ32018 အပေါ်	•9မှတ်ချက်
Rizwan ( "Riz") Virk စာရေးဆရာဗီဒီယိုဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ရှေ့ဆောင်ခြင်းနှင့်လွတ်လပ်သောရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူအရောင်းတစ်အောင်မြင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအွန်လိုင်းဗီဒီယိုဂိမ်းများနှင့်လေ့လာမှု၌သူ၏အတွေ့အကြုံကိုမှတဆင့်ကွမ်တမ်ရူပဗေဒနှင့်ဘာသာရေးလှုပ်ရှားမှုများပါဝင်ပါသည်, သူက multiplayer virtual reality ဂိမ်းထဲမှာတိုက်ရိုက်အလွန်ဖြစ်နိုင်ခြေကြောင်းနိဂုံးသို့ရောက်ကြ၏။ [ ... ]
ကျွန်ုပ်တို့၏ပြဿနာများဖြေရှင်းရန်အဘယ်သို့ပြုနိုင်သနည်း အကွာအဝေးမှာ Spooky အရေးယူ!
အတွက် Filed THE Simulator, MIND မှ & အသက်ကို CONTROL, NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	သြဂုတ်လ 1 2018 အပေါ်	•4မှတ်ချက်
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Videos ကိုအနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးမှု၏အယူအဆသို့အနည်းငယ်ထိုးထွင်းသိမြင်ပေးပါ။ ဒီအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ချက်ကွမ်တမ် entangelment ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအောကျဖျောပွဗီဒီယိုမှာကြည့်ရှုပါလျှင်, သင်သည်အဘယ်အရာကိုကြောင်းသက်တမ်းများအတွက်ခံစား၏နည်းနည်းရပေမည်။ ငါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုအကြောင်းအများကြီးပြောပါတယ်ထင်ကြောင့်ဝေါဟာရကိုအနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးမှု, နားလည်ရန်အသုံးဝင်သည်။ ငါ၏အယခင်ဆောင်းပါးတွင် [ ... ] အတွက်
အတွက် Filed THE Simulator, MIND မှ & အသက်ကို CONTROL, NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	ဇူလိုင်လ 30 2018 အပေါ်	• 22 မှတ်ချက်
သင်ကသတိပြုမိသောအခါသင်သာရိပ်မိအရာအားလုံး materializes ဖြစ်ကြောင်းကိုသိရကြသလား? တစ်ဦးသည်ယခုအခါနီးပါးရာစုအဟောင်းစမ်းသပ်မှုဖေါ်ပြသည်နှစ်ဆအလျားလိုက်အပေါက် (dual-port ကို) ရက်နေ့တွင်စမ်းသပ်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ဤမျှလောက်မယုံဖို့နဲ့တစ်ပြိုင်နက်ဤမျှလောက်ကြီးစွာသောအံ့သြစရာမှဦးဆောင်နေသောကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ကွမ်တမ်ရူပဗေဒပညာရှင်ကဤစမ်းသပ်မှု, အဆရာနဲ့ချီပွုပါပွီ။ ဒါဟာ [ ... ] သောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဖြစ်ပါသည်
တမန်တော်မိုဟာမက် (ငြိမ်းချမ်းမှုသက်ရောက်ပါစေ) နှင့် Geert တောကာတွန်းပြိုင်ပွဲများ၏ပုံများ
အတွက် Filed MIND မှ & အသက်ကို CONTROL, NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	ဇူလိုင်လ 27 2018 အပေါ်	• 12 မှတ်ချက်
ဒါဟာရှိတ် Imran Hosein အားဖြင့်မိန့်ခွန်းများပါဝင်သည်ကျွန်မမွတ်စ်လင်ညျပရောဖကျမိုဟာမက်၏နာမတော်ကိုဖော်ပြထားခြင်းနီးပါးဘယ်တော့မှ, သူတို့ကကျင့်ကိုကျင့်လျှင်ကြောင်းသမိုင်းနှင့်အစ္စလာမ့်ပရောဖက်ပြုချက်နှင့် ပတ်သက်. လက်ရှိဖြစ်ရပ်များမိမိခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနားထောင်လို၌ငါ့ကိုဒဏ်ခတ် သူတို့ကတစ်ဦးတစ်ခုလုံးကိုဝါကျထည့်ပါ။ [ ... ]
အတွက် Filed MIND မှ & အသက်ကို CONTROL, NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	ဇူလိုင်လ 26 2018 အပေါ်	• 48 မှတ်ချက်
ယနေ့ငါအာရုံကြောစနစ်ဖွံ့ဖြိုးမရလို့ကောင်းကောင်းစု 80 သို့သည်အထိထုံဆေးမပါဘဲအပေါ် operated သူငယ်ရွယ်ကလေးများနှင့်ကလေး traumatizing အကြောင်းကိုဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုစေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါကဒီမှာဆက်လက်မလုပ်ဆောင်ခင်ပထမဦးဆုံးစာဖတ်ခြင်းအတွက်ဆောင်းပါးအကြံပြုပါသည်။ တကယ်တော့ဒါဟာစိတ်ဒဏ်ရာအကြောင်းကိုပါပဲ။ ပထမဦးဆုံးအစိတ်ဒဏ်ရာ [ ... ]